Faa'iidooyinka mashiinka la xirrira gacanta farsamo - Shiinaha Longkou Fushi xirxirida
A dvantages ee gacanta farsamo mashiinka la xirrira
Sameynta meesha waa weyn. aagga sameynta wax ku oolka ah waa 1100 × 1400mm, waa 1.4 jeer ka badan mashiinka dhaqameedyada, waxaa loo diyaarin karaa sanduuqyada ka badan. U qaadan in model soo jireenka ah ee caaryada diyaarin karaa 20 sanduuq, 28 sanduuq model farsamo of caaryada la diyaarin karaa.
xawaaraha Production waa u soomi. sanduuqa kululeeyaha kala qaybiyey saddex meelood, xawaaraha goynta Haydarooliga waa ka dhaqso, oo hubka si farsamaysan u isticmaalaan si ay u nuugaan alaabta, dhammaan hababka kor ku xusan in la yareeyo waqtiga shaqada oo dhan.
⑴ sanduuqa Kul-dhererka total waa 4.4m, xad kordhiyo waqtiga kuleylka, ka fogaanaya in ka badan heerkulka sare dhalaaliyey xaashida, waqti isku mid ah samaynta saamayn wiilku afkuu ka fiican sare.
⑵ Haydarooliga dhululubo waa weyn. model dhaqanka Haydarooliga dhaleen dhululubo waa 160mm, halka farsamo model waa 220mm, meesha xiriir la kordhiyo 1 mar, cadaadiska saaran degaanka unit hoos u, si ay nolosha kordhiyo. Dhanka kale, saamaynta on circuit Haydarooliga iyo hoos u dhac waalka solenoid, sidoo kale sii dheereysato nolosha.
⑶ waxyaabaha xidhmooyin gacanta Farsamada labada dhinac, taas oo loo badbaadiyo waqtiga soo saarka suunka conveyor model dhaqanka ee, la kordhiyo xawaaraha wax soo saarka guud.
Farsamo xawaaraha saarka model gacanta gaari karaan 18-22cycles / min, saacad kasta soo saari kartaa 33000-37000pcs sanduuqa qadada. Iyadoo xawaaraha saarka model dhaqanka waa 12-15cycles / min, ie saacad kasta soo saari kartaa 12000-18000pcs, kaliya oolnimada badhkiis model gacanta farsamo.
Qoraalkani wuxuu ku laayeen inta u dhaxaysa laba sanduuqa on caaryada model dhaqanka ay tahay in la saabsan 2cm, halka on model cusub gacanta farsamo ma aha in ka badan 1cm. Tani waxay si weyn u yareeyo qashinka, ka dhigi soo saarka dheeraad ah oo ku dhammaadeen.
Save shaqaale, iyo in la yareeyo kharashka. Labada moodooyinka isticmaalaan isla shaqaale, waxay u baahan yihiin 3 shaqaalaha / wareeg, si isticmaali model cusub gacanta farsamo lagu yarayn karo kharashka soo saarka, samaynta faa'iido dheeraad ah.
Nuugaan iyo jiid weelasha cuntada ilaa. Xitaa weelasha ku aadan la nuugo soo baxay si guul ah, tani ma saameyn doono kooxda.
Goynta aagga guuri kartaa: kexeeyey by matoorka, waa faa'iido u beddelo wasakhahaasi iyo badbaadin karo waqtiga wasakhahaasi beddelo.
eliminators Electrostatic ayaa lagu wadaa on jarida goobta, iyo meel wax lagu kaydsado, waxay baabiin karaa ma guurto ah ka soo saaray inta lagu guda jiro geeddi-socodka sameynta. Hubi in laga yaabaa in ammaanka producting.
biraha Hagaha waxaa sameeyey bir, more raagaya badan biraha guide aluminium
waqti Post: Jul-12-2018